नेपाल एयरलाइन्सको वित्तीय सुधार हुँदै : अघिल्लो वर्षको तुलनामा आम्दानी ४७% ले बढ्यो – Bihani Online
नेपाल एयरलाइन्सको वित्तीय सुधार हुँदै : अघिल्लो वर्षको तुलनामा आम्दानी ४७% ले बढ्यो
२१ बैशाख २०७९ १३:१४ May 4, 2022 bihani
काठमाडौं,बैशाख,२१-आर्थिक रुपमा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) पछिल्ला दिनमा सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ ।
निगमको पछिल्लो ६ महीनाको वित्तीय सूचकले पनि निगमको सुधारको यात्रालाई पुष्टि गर्छ । जहाजको उपयोगिता, उच्चदरको सिट अकुपेन्सी एवं गन्तव्य विस्तारका कारण निगमको आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्दै गएको जानकारी दिइएको छ ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगको वित्तीय पक्ष सुदृढ हुँदै गएको दाबी गरे ।
यो व्याज भुक्तानीको दायित्व नरहँदा पनि आर्थिक रुपमा निगमलाई ठूलो राहत भएको छ । निगमले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम ८ महीना (साउनदेखि फागुन) सम्म रू. ८ अर्ब ३९ करोड आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतले वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आम्दानी रू. ५ अर्ब ७० करोड थियो ।
निगमले दुई थान न्यारोबडी र दुई थान वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सहुलियत प्राप्त कर्जामा चिनियाँ जहाज खरीद गर्दाको साँवा ब्याज भुक्तानीको कुल दायित्व रू. ४७ अर्ब ४४ करोड पुगेको जानकारी दिएको छ ।
निगमले अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थामा ओभर ड्राफ्टबाट लिएको पूरै रकम भुक्तानी गरी रू. एक अर्ब ३३ करोड ९९ लाख ७६ हजार ६६७ नगद मौज्दात कायम हुनाले निगमले यस अवधिमा रू. एक अर्ब २७ करोड दुई लाख ५१ हजार ६३७ वित्तीय आम्दानी बचत गरेको देखिन्छ ।
ओभर ड्राफ्ट रकम भुक्तानीपछि ५ महीनाको अवधिमा निगमलाई यसको ब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्वबापतको रकमसमेत बचत भएको छ । यो व्याज भुक्तानीको दायित्व नरहँदा पनि आर्थिक रुपमा निगमलाई ठूलो राहत भएको छ ।
निगमले उडान संख्या विस्तार र नयाँ गन्तव्य थपेर अन्तरराष्ट्रिय उडानमा रहेका ए३२० सेरिजका २ ओटा न्यारोबडी र ए३३० सेरिजका दुईओटा वाइडबडी जहाजको औसत सीट अकुपेन्सी हाल ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताइएको छ । विसं २०७८ कात्तिकमा न्यारोबडी जहाजले सात घण्टा ३८ मिनेट र वाइडबडी जहाजको ६ घण्टा ३६ मिनेट उडान गरेकामा २०७९ चैतमा न्यारोबडीको ९ घण्टा ४८ मिनेट र वाइडबडीको १० घण्टा ४१ मिनेट जहाज उपयोगिता भएको थियो ।
निगमले आफ्नो गन्तब्य विस्तारका क्रममा यही वैशाख ९ गतेदेखि साउदी अरेबियाको रियादमा नियमित उडान प्रारम्भ गरेको छ । नेपाली श्रमिकहरुको आकर्षक गन्तव्य मानिएको रियादमा निगमले हाललाई हप्तामा दुुई ओटा उडानबाट प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
बजार मागअनुसार आगामी दिनमा अझ थप उडान विस्तार गर्ने कार्ययोजना रहेको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताए । निगमले साउदी अरेबियाको जेद्दा र दम्माममा पनि उडान अनुमति पाइएको छ । रियाद (साउदी अरेयिबा) नयाँ गन्तव्य मात्र नभएर चार लाखभन्दा बढी नेपालीहरु रहेको र यात्रुसंख्या एवं भाडादरका कारणले थप आकर्षक गन्तव्य पनि हो । निगमले विभिन्न कारणले बन्द वा स्थगित भएका निगमका अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडान सञ्चालन गरिसकेको छ ।
निगमले हाल भारतको नयाँदिल्ली गन्तव्यमा दैनिक दुई उडान गरिरहेको छ । यस्तै मुम्बईमा साताको तीन, बैंलोरमा साताको तीन उडान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी दोहा र दुबई समान साताको ५ उडान तथा हङकङमा साताको एक उडान, क्वालालम्पुरमा साताको तीन उडान गरिरहेको छ ।
बैंककमा साताको तीन उडान र रियादमा साताको दुई उडान सञ्चालन गरिरहेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले ११औं नयाँ गन्तव्यको रुपमा चीनको क्वान्चाउ र १२ औं गन्तव्यको रुपमा दक्षिण कोरियाको सोलमा उडान विस्तारको लक्ष्य राखेको छ ।
निगमले धनगढी र नेपालगञ्जलाई आधार बनाएर सुदूर पश्चिममा नियमित उडान सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७८ सालको बडादशैंको अवधिमा आएको बेमौसमी वर्षात र बाढी–पहिरोले नेपालको पश्चिम पहाडी जिल्लाहरुमा यातायात अवरुद्ध भई दशैं मनाउन गाउँघर गएका नागरिकहरु अलपत्र परेकोले तत्कालै उद्धार हुने गरी बझाङ, डोटी, अछाम, बाजुरालगायतका जिल्लाहरुमा धनगढी र नेपालगञ्जलाई आधार बनाएर उद्धार उडान सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यसयता ती जिल्लाहरुमा नियमित व्यावसायिक उडान सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै निगमले आन्तरिक उडानमा पनि गन्तव्य विस्तार गरेको छ । इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरेको निगमले काठमाडौं–इलाम–काठमाडौं नियमित उडान गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
निगमले काठमाडौंबाट थामखर्क, खानीडाँडा, भोजपुर, इलाम, फाप्लु, ताप्लेजुङ, दाङ, नेपालगञ्ज नियमित उडान गर्दछ भने नेपालगञ्जबाट रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, ताल्चा, सिमकोट उडान गर्ने गर्दछ । त्यस्तै धनगढीबाट डोटी, साँफेबगर, बाजुरा र बझाङ उडान गर्दै आएको छ ।
निगमले विश्वका प्रसिद्ध वायुसेवा कम्पनीसँग अन्तरदेशीय टिकट विक्री गरिरहेको छ । जसले गर्दा निगमको सिधा उडान नहुने गन्तव्यमा निगमकै टिकटबाट यात्रा गर्न गर्न पाइन्छ । रासस
नेपाल संग जिम्बावे ८ विकेटले पराजीत